သန့်စင်ခန်းထဲမှာ သရဲခြောက်ခံရတဲ့ ဗီဒီယို အွန်လိုင်းတွင် ပျံ့နှံ့ - APANNPYAY
Home / ပရလောကအကြောင်း / သန့်စင်ခန်းထဲမှာ သရဲခြောက်ခံရတဲ့ ဗီဒီယို အွန်လိုင်းတွင် ပျံ့နှံ့
သန့်စင်ခန်းထဲမှာ သရဲခြောက်ခံရတဲ့ ဗီဒီယို အွန်လိုင်းတွင် ပျံ့နှံ့
Apann Pyay 12:08 AM ပရလောကအကြောင်း Edit
စင်ကာပူနိုင်ငံရှိ အဆောက်အဦတစ်ခုရှိ အမျိုးသမီးသန့်စင်ခန်းထဲတွင် အမျိုးသမီးတစ်ဦးတည်း လက်ဆေးနေစဉ် သူမ၏ သူငယ်ချင်းဖြစ်သူက နောင်ပြောင်ကျီစယ်ရန် ခိုး၍ ဗီဒီယိုရိုက်ထားပြီး သူမအမည်အား ခေါ်လိုက်စဉ် သူမက ထိတ်လန့်တကြား လည်ပြန်လှည့်ကြည့်ခဲ့သည်။
သို့သော် မှန်ထဲမှ သူမ၏ အရိပ်မှာမူ လက်ဆေးမြဲ လက်ဆေးနေလျှက်ရှိသည်ကို ဗီဒီယိုရိုက်သူ သူငယ်ချင်းက မြင်မိကာ ထိတ်လန့်တကြား ထွက်ပြေးခဲ့သည်။ ဗီဒီယိုတွင် မှတ်တမ်းတင်ထားခဲ့မိသည်။
အဆိုပါဗီဒီယို အွန်လိုင်းတွင် ပျံ့နှံ့ခဲ့ပြီးနောက် ဝေဖန်သူအချို့က အမွှာညီအစ်မနှစ်ယောက် ဖြစ်တိုင်ကြောင်း ထောက်ပြပြောဆိုကာ ဗီဒီယိုမှာ လုပ်ကြံထားခြင်း ဖြစ်ကြောင်း ဝေဖန်ထားခဲ့သည်။ သင်ရော ဘယ်လို ထင်မြင်မိပါသလဲ..? တစ်ကယ်လား..? လုပ်ကြံထားတာလား..?
စငျကာပူနိုငျငံရှိ အဆောကျအဦတဈခုရှိ အမြိုးသမီးသနျ့စငျခနျးထဲတှငျ အမြိုးသမီးတဈဦးတညျး လကျဆေးနစေဉျ သူမ၏ သူငယျခငျြးဖွဈသူက နောငျပွောငျကြီစယျရနျ ခိုး၍ ဗီဒီယိုရိုကျထားပွီး သူမအမညျအား ချေါလိုကျစဉျ သူမက ထိတျလနျ့တကွား လညျပွနျလှညျ့ကွညျ့ခဲ့သညျ။
သို့သျော မှနျထဲမှ သူမ၏ အရိပျမှာမူ လကျဆေးမွဲ လကျဆေးနလြှေကျရှိသညျကို ဗီဒီယိုရိုကျသူ သူငယျခငျြးက မွငျမိကာ ထိတျလနျ့တကွား ထှကျပွေးခဲ့သညျ။ ဗီဒီယိုတှငျ မှတျတမျးတငျထားခဲ့မိသညျ။
အဆိုပါဗီဒီယို အှနျလိုငျးတှငျ ပြံ့နှံ့ခဲ့ပွီးနောကျ ဝဖေနျသူအခြို့က အမှာညီအဈမနှဈယောကျ ဖွဈတိုငျကွောငျး ထောကျပွပွောဆိုကာ ဗီဒီယိုမှာ လုပျကွံထားခွငျး ဖွဈကွောငျး ဝဖေနျထားခဲ့သညျ။ သငျရော ဘယျလို ထငျမွငျမိပါသလဲ..? တဈကယျလား..? လုပျကွံထားတာလား..?